किशोरवयमा उचाई बढाउन पाँच योगासन | सुदुरपश्चिम खबर
शरीरको उचाई बढ्ने एक निश्चित उमेर हुन्छ । खासगरी किशोर चरणमा पुगेपछि शरीरको विकासक्रम तिब्र हुन्छ । २०–२२ बर्षपछि यो धीमा हुन्छ ।
शरीर कति उचाईको हुनुपर्छ ? यसको एक आदर्श मापदण्ड छ । सोही मापदण्ड अनुरुपको उचाई स्वभाविक र सुहाउँदिलो मानिन्छ । शरीरको उचाई सही हुनुमा वंशानुगत गुण लगायत हाम्रो शारीरिक अवस्था, खानपान आदि जिम्मेवार हुन्छन् । किशोरवयमा पोषणयुक्त खानेकुराको अभाव र पर्याप्त शारीरिक गतिविधि नहुँदा पनि उचाई बढ्दैन ।
त्यसो त किशोरवयमा केही यस्ता व्यायाम पनि गर्न सकिन्छ, जसले शरीरको उचाई बढाउन मद्दत गर्छ ।
२. योग मुद्रामा सुधार
जे होस् योगले बलियो मांसपेशी बनाउनको लागि राम्रो भूमिका खेल्छ । तपाईं कुनै पनि समय फरक महसुस गर्न सक्नुहुन्छ । धेरै समय सिधा स्थिति बनाइराख्दा तपाईंको शरीर केही इन्च माथि उठ्न सक्छ ।
२. योग ब्रिथिङले सजगता बढाउँछ
योगको अभ्यासले सास फेर्न र जागरूकता पैदा गर्नमा मद्दत गर्छ। जब तपाईं दिनभरि सासमा ध्यान केन्द्रित गर्न जान्नुहुन्छ, तपाईं स्वाभाविक रूपमा राम्रो मुद्रा बनाइ राख्न सक्नुहुन्छ । ताकि तपाईं आफ्नो अधिकतम क्षमतामा सास फेर्न सक्नुहुन्छ ।
३. योगले मांसपेशीमा हुने हानि रोक्छ
योगले शारीरिक रूपमा सक्रिय रहन मद्दत गर्छ । जसले मांसपेशीमा हुने हानि रोक्न मद्दत गर्छ। मांसपेशीमा हुने हानि निष्क्रियता वा उमेरका कारण हुन सक्छ।
यो पनि महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईं एक स्वस्थ आहार र दुखाई कम गर्न पनि योगको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
उचाइमा वृद्धि गराउने योग आसन
बच्चा वा किशोरावस्थामा यदि योग अभ्यास गरिन्छ भने यसले आफ्नो उचाइ बढाउन मद्दत गर्छ। टाउकोदेखि पैतालासम्म तान्नुको कारण, यो आसन पनि तन्त्रिका र शरीरसँग सम्बन्धित विभिन्न रोगबाट पनि हामीलाई लाभ हासिल हुन्छ ।
भुजंगासनले हाम्रो पीठ बलियो र मेरूदण्ड लचिलो बनाउँछ। यसले हाम्रो पाचन र प्रजनन प्रणालीलाई बलियो बनाउँछ। यो आसनको नियमित अभ्यास शरीर सुडौल बनाउँछ र उचाइको उचित वृद्धिमा मद्दत गर्छ।
यसले मेरूदण्ड र हड्डीलाई लचिलो बनाउनको लागि प्रभावकारी काम गर्छ । यसबाहेक यो आसनको अभ्यास गरेर व्यक्तिको उचाइ पनि धेरै सजिलो बढ्दै जान्छ।
वृक्षासनले तपाईंलाई स्ट्रेचिङको माध्यमबाट दिमाग र शरीरलाई स्थिर बनाउँदै लैजान्छ । यो आसनले तपाईंको जोर्नी र हड्डीहरुलाई बलियो बनाउँछ। उचाइमा वृद्धि हुँदा शरीरको हड्डी संरचनामा छिटो परिवर्तन आउँछ । यो आसनले पनि उनीहरूलाई ठीक गर्नमा मद्दत गर्छ।
यस बाहेक, यो पनि कूल्हों र छाती को भाग खिंचाउन मद्दत गर्दछ। यो तपाइँको कंधों को आन्दोलन मुक्त र हात टोन मा पनि मद्दत गर्दछ।
धेरै अन्य आसनहरु जस्तै यो आसनमा पनि धेरै चीजहरुको मिश्रण पाइन्छ। यसले तपाईंको खुट्टामा शक्ति र स्थिरता विकास गर्न सहयोग गर्छ । अनलाइनखबर बाट सभार
मनसुनी रेखा नेपालनजिक आउँदै, वर्षा पुनः बढ्ने सम्भावना (यी ठाउँमा भारी बर्षा हुने)